Ku-Xigeenka Xoghayaha Guud Ee QM Oo ka Hadashay Kiiska Ikraan Tahliil Ee Khilaafka Sababay. • Oodweynenews.com Oodweyne News
Ku Xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Amina Jane Maxamed oo kulamo kala duwan la yeelatay masuuliyiinta dowladda ayaa markii ugu horaysay ka hadashay kiiska Ikraan Tahliil, kaasoo ka dhashay khilaafka madaxda dawlada.
Amina Jane Maxamed oo wax laga weydiyay kiiska Ikraan, waxay ku jawaabtay, “in sarreynta sharciga iyo helitaanka caddaaladda ay muhiim u yihiin ka hortagga rabshadaha waana xuquuqda haweenka oo dhan”.ayay tidhi .
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa wafddiga Qaramada Midoobey u sheegay inay mas’uuliyadi ka saaran tahay sidii ay caddaaladda ku heli lahaayeen qoyska Ikraan Tahliil.
Wuxuu sheegay in ‘in aanay habbooneyn in la siyaasadeeyo kiiska Ikraan” sida uu baahiyay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Somalia ee Maxamed Xuseen Rooble.